Xildhibaano Lagu la yahay Nolol iyo Geeri & Dagaal culus oo dhex maray…… – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ahmed weheliye Gaashaan 5 June 2018
Balcad ( Mareeg News ) Iska hor imaad xoogan ayaa ku dhex maray kolonyo ciidama ah oo galbineeysay xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeele iyo Ciidamo Taabacsan Xarakada al shaab oo jidka u galay kolanyadan .
Qasaare xoogan ayaa ka dhashay iska hor imaadakan lamana cadeeyn karo tirada dhimashada iyo dhaawac ka dhashay dagaalkan oo qorax dhicii maanta ku dhaxmaray labada ciidan Deegaanka ayaa ka dhacay halka loo yaqaano Ceel geeloow ee dhacada wada aada Degmada jowhar gaar ahaan inta u dhaxeysa degmada balcad iyo degaanka garsaale.
wararka nagasoo gaaraya deegaanada ayaa sheegaya in xildhibaano iyo qaar ka tirsan istaafkooda aan lagu haayin geeri iyo nolol, Qaatkalana waxaa lasoo sheegayaa ineey suura gal tahay ineey qafaasheen Ciidankii soo weeraray.
Gobtan ayaa inta badan ah meel loo galo ciidanka iyo saraakiisha dowlada JFS iyo maamulka hirshabeele, Biloowgii sanadkan ayee alshaab ku qaarijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka malatariga JFS oo goobta marayay.
Ciidanka malatariga soomaaliya oo howlgalo ka sameeyay goobtan maata loo galay xildhibaanada maamulka hirshabeele weli lagama guul gaarin, waxaa xusid mudan in Saraakiisha maamulka hirshabeele ay ku baxaan intooda badan diyaarad cabsi xoogan ayaa ka jirta wadan isku xerta balcad iyo jowhar, oo ay ku maqanyihiin saraakiil muhiim u ahaa Dowlada Federalka.